192.168.8.1 - Imigomo Nemibandela
Siyakwamukela ku 192.168.8.1!
Le migomo nemibandela ichaza imithetho nezimiso zokusetshenziswa kweWebhusayithi ka-192.168.8.1, etholakala ku- https://19216881.one/.
Ngokungena kule webhusayithi sicabanga ukuthi uyayamukela le migomo nemibandela. Ungaqhubeki nokusebenzisa i-192.168.8.1 uma ungavumi ukuthatha yonke imigomo nemibandela eshiwo kuleli khasi. Imigomo Nemibandela yethu yadalwa ngosizo lwe- I-Generator Terms and Conditions futhi Imigomo Nemibandela Mahhala Generator.
Amagama alandelayo asebenza kule Migomo Nemibandela, Isitatimende Sobumfihlo kanye Nesaziso Sokuzikhipha Emthwalweni nazo zonke izivumelwano: “Iklayenti”, “Wena” kanye no “Wakho” kubhekiswe kuwe, umuntu ongena kule webhusayithi futhi athobele imigomo nemibandela yeNkampani. "Inkampani", "Ngokwethu", "Thina", "Yethu" kanye "Nathi", kubhekisa eNkampanini yethu. “Iphathi”, “Amaphathi”, noma “Thina”, kubhekiswa kuzo zombili iKlayenti nakithi uqobo. Yonke imigomo ibhekisa ekunikezelweni, ekwamukelweni nasekucatshangweni kwenkokhelo edingekayo ukwenza inqubo yosizo lwethu kwiKlayenti ngendlela efanelekile ngenhloso ebonakalayo yokuhlangabezana nezidingo zeklayenti maqondana nokuhlinzekwa kwezinsizakalo zeNkampani, ngokuya futhi kungaphansi komthetho owandile waseNetherlands. Noma ikuphi ukusetshenziswa kwesigama esingenhla noma amanye amagama kubunye, ubuningi, ofeleba kanye / noma yena, kuthathwa njengokushintshana ngakho-ke kubhekiswa kokufanayo.
Sisebenzisa ukusetshenziswa kwamakhukhi. Ngokungena ku-192.168.8.1, uvumile ukusebenzisa amakhukhi ngokuvumelana nenqubomgomo yobumfihlo ye-192.168.8.1.
Amawebhusayithi amaningi asebenzisana asebenzise amakhukhi ukuvumela ukuthi sithole imininingwane yomsebenzisi kokuvakashelwa ngalunye. Amakhukhi asetshenziswa yiwebhusayithi yethu ukuvumela ukusebenza kwezinye izindawo ukuze kube lula kubantu abavakashela iwebhusayithi yethu. Abanye abalingani bethu abambisene nabo bokukhangisa nabo bangasebenzisa amakhukhi.
Ngaphandle kokuthi kushiwo ngenye indlela, i-192.168.8.1 kanye / noma abanikazi bamalayisense bayo banamalungelo empahla yengqondo yakho konke okokusebenza ngo-192.168.8.1. Wonke amalungelo empahla yokusungula agodliwe. Ungakuthola lokhu kusuka ngo-192.168.8.1 ukuze uzisebenzisele wena uqobo ngaphansi kwemikhawulo ebekwe kule migomo nemibandela.
Shicilela kabusha impahla kusuka ngo-192.168.8.1
Thengisa, qasha noma usebenzise ilayisense elincane kusuka ngo-192.168.8.1
Khiqiza kabusha, uphindaphinde noma ukopishe izinto ezisuka ku-192.168.8.1
Sabalalisa kabusha okuqukethwe kusuka ku-192.168.8.1
Lesi Sivumelwano sizoqala ngosuku olukulo.
Izingxenye zale webhusayithi zinikeza ithuba lokuthi abasebenzisi bathumele futhi bashintshisane ngemibono nolwazi ezindaweni ezithile zewebhusayithi. 192.168.8.1 ayihlungi, ihlele, ingashicileli noma ibuyekeze amazwana ngaphambi kokuba khona kwawo kuwebhusayithi. Amazwana awakhombisi imibono nemibono ye-192.168.8.1, abasebenzeli bayo kanye / noma abaxhumana nabo. Amazwana akhombisa imibono nemibono yomuntu othumela imibono nemibono yakhe. Ngokwezinga elivunyelwe yimithetho esebenzayo, i-192.168.8.1 ngeke ibe nesibopho samazwana noma nganoma yisiphi isikweletu, umonakalo noma izindleko ezibangelwe kanye / noma ukuhlupheka ngenxa yanoma yikuphi ukusetshenziswa kanye / noma ukuthunyelwa kanye / noma ukuvela kwamazwana kule webhusayithi.
192.168.8.1 unelungelo lokuqapha wonke amazwana nokususa noma yimiphi imibono engathathwa njengengalungile, ecasulayo noma ebangela ukwephulwa kwale Migomo Nemibandela.
Uyavuma futhi umelele lokho:
Unelungelo lokuthumela amazwana ku-website yethu futhi unayo amalayisense afanelekile futhi uyavuma ukuba wenze kanjalo;
Amazwana awahlaseli noma yimaphi impahla engqondo, okubandakanya ngaphandle kwemikhawulo ye-copyright, ilungelo lobunikazi noma uphawu lokuhweba kwanoma yimuphi umuntu wesithathu;
Amazwana awaqukethe noma yikuphi ukuhlambalaza, okumbi, okucasulayo, okungafaneleki noma okunye okungekho emthethweni okuhlasela okuyimfihlo
Amazwana ngeke asetshenziselwe ukucela noma ukukhuthaza ibhizinisi noma inkambiso noma ukwethula imisebenzi yezohwebo noma umsebenzi ongemthetho.
Ngalokhu unikeza u-192.168.8.1 ilayisense elingakhethi ukusebenzisa, ukukhiqiza kabusha, ukuhlela nokugunyaza abanye ukuthi basebenzise, ​​bakhiqize futhi bahlele noma yimaphi amaMazwana akho nganoma yiluphi uhlobo, amafomethi noma imidiya.
Ukuxhuma kokuqukethwe kwethu
Lezi zinhlangano ezilandelayo zingase zixhumanise neWebhusayithi yethu ngaphandle kwemvume ebhaliwe ngaphambilini:
Abathengisi be-intanethi e-inthanethi bangaxhuma kwiWebhusayithi yethu ngendlela efanayo nokuxhumanisa kumawebhusayithi amanye amabhizinisi adweliswe; futhi
Amabhizinisi avunyelwe kabanzi wesistimu ngaphandle kokucela izinhlangano ezingenzi inzuzo, izitolo zokuthenga ezithandwayo, kanye namaqembu e-aidity fundraising okungase kungabi yi-hyperlink kuwebhusayithi yethu.
Lezi zinhlangano zingase zixhumanise nekhasi lethu lasekhaya, ezincwadini noma kwezinye izinsiza zeWebhusayithi uma nje isixhumanisi: (a) kungekho ngendlela ekhohlisayo; (b) akusho ngokukhohlisa ukuxhaswa, ukugunyazwa noma ukuvunyelwa kweqembu elixhumanisayo nemikhiqizo yalo kanye / noma amasevisi; futhi (c) kufanelana ngaphakathi kokuqukethwe kwesayithi leqembu elixhumanisayo.
Singacubungula futhi sivume ezinye izicelo zokuxhumanisa ezivela ezinhlotsheni zezinhlobo ezilandelayo:
imithombo yomniningwane ejwayelekile yomthengi kanye / noma ibhizinisi;
izindawo zomphakathi we-dot.com;
izinhlangano noma amanye amaqembu abamele izinsiza;
abaqondisi abaqondisi be-intanethi;
ama-accounting, umthetho kanye nama-consulting firms; futhi
izikhungo zemfundo kanye nezinhlangano zokuhweba.
Sizovuma izicelo zokuxhumanisa ezivela kulezi zinhlangano uma sinquma ukuthi: (a) isixhumanisi ngeke sisenze sibonakale singathandeki kithina noma emabhizinisini ethu aqinisekisiwe; (b) inhlangano ayinamarekhodi amabi kithi; (c) inzuzo kithi ngokubonakala kwesixhumanisi ikhokhela ukungabi bikho kuka-192.168.8.1; futhi (d) isixhumanisi sisesimweni solwazi olujwayelekile lwezinsizakusebenza.
Lezi zinhlangano zingase zixhumanise nekhasi lethu lasekhaya uma nje isixhumanisi: (a) asikho nganoma iyiphi indlela ekhohlisayo; (b) akusho ngokukhohlisa ukuxhaswa, ukugunyazwa noma ukuvunyelwa kweqembu elixhumanisayo nemikhiqizo noma amasevisi ayo; futhi (c) kufanelana ngaphakathi kokuqukethwe kwesayithi leqembu elixhumanisayo.
Uma ungomunye wezinhlangano ezibalwe esigabeni 2 ngenhla futhi unentshisekelo yokuxhumanisa newebhusayithi yethu, kufanele usazise ngokuthumela i-imeyili ku-192.168.8.1. Sicela ufake igama lakho, igama lenhlangano yakho, imininingwane yokuxhumana kanye ne-URL yesayithi lakho, uhlu lwawo wonke ama-URL ohlose ukuwaxhumanisa neWebhusayithi yethu, kanye nohlu lwama-URL esayithi lethu ongathanda ukuwathumela isixhumanisi. Linda impendulo amasonto ama-2-3.
Izinhlangano ezivunyelwe zingase zixhumane ne-Website yethu kanje:
Ngokusetshenziswa kwegama lethu lenkampani; noma
Ngokusebenzisa i-uniform resource locator exhunywe kuyo; noma
Ngokusetshenziswa kwanoma yikuphi ukuchazwa kweWebhu yethu kuxhunyaniswe nalokhu kunengqondo ngaphakathi kokuqukethwe kanye nokufometha kokuqukethwe kwisayithi lomcimbi wokuxhumanisa.
Akukho ukusetshenziswa kwelogo ka-192.168.8.1 noma omunye umsebenzi wobuciko ozovunyelwa ukuxhuma engekho esivumelwaneni selayisense yophawu lokuhweba.
Ngaphandle kokugunyazwa ngaphambilini nemvume ebhaliwe, awukwazi ukudala amafremu azungeze amaWebhu ethu aguqukayo nganoma iyiphi indlela i-presentation noma ukubukeka kweWebhu yethu.
Ngeke sibophezele kunoma yikuphi okuqukethwe okuvela kuwebhusayithi yakho. Uyavuma ukuvikela nokusivikela kuzo zonke izimangalo ezikhulayo kwiwebhusayithi yakho. Azikho izixhumanisi (ama) okufanele zivele kunoma yiliphi iWebhu engachazwa njengenhlamba, ehlazo noma ebugebengu, noma ephula umthetho, ephula ngokwehlukile, noma evikela ukwephulwa noma okunye ukwephula, noma yiliphi ilungelo lesithathu.
Sicela ufunde inqubomgomo yobumfihlo
Sigcina ilungelo lokucela ukuthi ususe zonke izixhumanisi noma noma yikuphi ukuxhumana okuqondile ku-Iwebhusayithi yethu. Uyavuma ukuthi ususe ngokushesha zonke izixhumanisi kwiWebhu yethu ngokucela. Siphinde sigcine ilungelo lokungena le migomo nemibandela futhi lixhumanisa inqubomgomo nganoma yisiphi isikhathi. Ngokuqhubeka ngokuxhumanisa ne-Website yethu, uyavuma ukuthi ubophezele futhi ulandele le migomo nemibandela yokuxhumanisa.
Ukususwa kwezixhumanisi kusuka kuwebhusayithi yethu
Uma uthola noma yikuphi ukuxhumanisa kwiWebhu yethu ecasula nganoma yisiphi isizathu, ukhululekile ukuxhumana nathi futhi usitshele noma yimuphi umzuzu. Sizocubungula izicelo zokususa izixhumanisi kodwa asibophekile ukuba noma kunjalo noma ukuphendula kuwe ngokuqondile.
Asiqinisekisi ukuthi ulwazi olukulo website liqinisile, asiqinisekisi ukuphelela noma ukuchithwa kwayo; futhi asithembisi ukuqinisekisa ukuthi iwebhusayithi ihlala itholakale noma ukuthi ukwaziswa kwiwebusayithi kugcinwe kusesikhathini.
Ngokwezinga eliphezulu evunyelwe ngumthetho osebenzayo, asikhipha zonke izethulo, iziqinisekiso kanye nemibandela ephathelene newebhusayithi yethu nokusetshenziswa kwale website. Akukho lutho kulo mthengisi:
ukukhawulela noma ukukhipha isinqumo sethu sokufa noma ukulimala komuntu siqu;
ukukhawulela noma ukubeka eceleni isikweletu sethu noma umthwalo wakho wokukhwabanisa noma ukukhohlisa okungalungile;
ukukhawulela noma yiziphi izimali zethu noma izikweletu zakho nganoma iyiphi indlela engavunyelwe ngaphansi komthetho osebenzayo; noma
kungabandakanyi noma yiziphi izikweletu zethu noma izikweletu zakho ezingeke zikhishwe ngaphansi komthetho osebenzayo.
Ukulinganiselwa kanye nokuvinjelwa kwecala elibekiwe kulesi Sigaba nakwezinye izindawo kule mvume: (a) kuncike esigabeni esandulele; futhi (b) ukulawula zonke izikweletu ezivela ngaphansi kwemvume, kufaka phakathi izikweletu ezivela kwinkontileka, ngokungahambisani nokuphulwa komsebenzi osemthethweni.
Uma nje i-website kanye nokwaziswa kanye nezinsizakalo kwi-website zinganikezwa mahhala, ngeke sibe nesibopho sokulahlekelwa noma ukulimala kwanoma imuphi uhlobo.
Izigaba Ukukhangisa Imeyili kwemikhumbi